Igumbi kwiPenthouse yomqeshi olungileyo (owesifazane)
Le ndawo ikwisiqingatha sobude obuphezulu kumbindi wesixeko saseWiesbaden, igcinwe kakuhle kakhulu, ineemitha ezisisikwemitha ezili-100, izixhobo ezilungileyo, ikhitshi elivulekileyo, igumbi lokuhlambela emini, iparquet, umoya womoya, ibalcony yelanga enefenitshala yokuphumla kunye nembono entle yendlu. isixeko.
Igumbi elinefenitshala elinebhedi ephindwe kabini kunye newodrophu kunye nedesika. Le flethi iqeshelwe umfazi oqeshisayo ofuna ukucoceka kunye nentsebenziswano yakhe. Nceda ubuze ngegama elipheleleyo kunye nesizathu sokurenta!
Iflethi eqaqambileyo ikwindlu ezolileyo kweyona ndawo iphakamileyo yaseWiesbaden kwaye inika umbono omhle phezu kweWiesbaden. Umbindi wesixeko unokufikelelwa ngeenyawo ngemizuzu nje embalwa.
Ikhitshi yeyangoku kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo kumgangatho ophezulu. Ukusuka kwindawo yokutyela unokonwabela ukujonga ngaphezulu kweWiesbaden.
Kwigumbi lokuhlala, ninokuhlala kunye ngokukhululekileyo okanye nibukele iTV okanye iAmazon Prime, Netflix & Co. kwi-intanethi ye-UHD TV.
Igumbi lokuhlambela liqhakazile kwaye linobungane ngenxa yokukhanya kwendalo kwaye line-cubicle yeshawa. Iflethi inomatshini wokuhlamba, isomisi, ibhodi yoku-ayina kunye neayini.
Kwibalcony enelanga, ifanitshala yegumbi lokuphumla ibonelela ngendawo yeeyure ezipholileyo kunye netafile yebhastile isebenza njengendawo efanelekileyo yesidlo sakusasa sangaphandle.
Igumbi lakho libonelela ngebhedi ephindwe kabini (DB) enoomatrasi abakumgangatho ophezulu, idesika kunye newodrophu ephangaleleyo.
Irediyasi yokushukuma: Igumbi lakho + 60sqm iindawo eziqhelekileyo + ibhalkhoni enefenitshala yokuphumla!
I-intanethi enesantya esiphezulu, efumaneka ngamandla kuyo yonke iflethi ukusuka kwi-amplifiers ezimbini zeDevolo.
Ukupaka kwindawo ekufutshane akukho ngxaki (akukho ndawo yokupaka abahlali), unokupaka ibhayisekile kwindawo engaphantsi.
Indlu ikwindawo enomtsalane eyi-1a kwikota yomqambi weWiesbaden. Indlu ibekwe ngokuthe ngqo ngaphezu konyawo lombindi wesixeko kunye noqhagamshelo lwebhasi elungileyo yomgca 8: misa iThomaestrasse; Ixesha lokuhamba ngebhasi Isixeko: 3 imiz. okanye i-hBF: imizuzu eyi-10 (umgca 8); Ixesha lokuhamba nge-e-scooter ukuya kwi-HBF: 6 min.). Ngenxa yesiqingatha sobude obuphezulu kumbindi wesixeko kunye neTaunus ngasemva, ungonwabela umoya olungileyo unyaka wonke. Ngemizuzu embalwa unokuthatha i-A66 ukuya eFrankfurt, Mainz naseRheingau ngemoto. Kwisikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt ungafika apho ngemoto ngemizuzu eyi-15 ukuya kwengama-20, kwisixeko saseFrankfurt ngemizuzu engama-30 kwaye ngokunjalo nangendlela kaloliwe i-hBF Wiesbaden network.
Ndinikezela ngalo lonke ulwazi malunga nefulethi kunye nommandla waseWiesbaden. Ufumana isikhokelo sam sasekhaya!
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R8068
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wiesbaden